प्रधानमन्त्री बन्न नपाएका शेरबहादुर माथि जितु नेपालले यस्तो के गरे? हेर्नुस् भिडियो! – KhabarTime
‘सभापति ज्यू शितल निवास जाने वेला भएन?’ नेपथ्यबाट महिलाको प्रश्न छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जस्तै हुलिया बनाएका यी ब्यक्ति भन्छन्, ‘अब के का जाने शितल निवास? उता चाँही माधव नेपाल थापाका घर घरमा गएर सप्पैकुरा थाहा पाउने गरि चार चार घण्टा वार्ता गर्ने । यता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो चाँही दिनभरी ….. मजाले बस्ने ।
उतापटि प्रचण्ड यता जाउँ कि उता जाऔं दोधारमा पर्ने । उता बाबुराम भट्टराई घरमा बसेर स्टाटस ठो क्ने । अनि मैले कहाँ बाट जाने शितल निवास? मैले जानेको छ नि सबलाई चै नि । अब फेरि वार्ता गर्ने, सहमति गर्ने भनेर चै नि बिहान बिहान वार्ता भन्दै निन्द्रा डिस्टर्व गर्न घरमा त आउन् न । सबलाई कुकुर लाउन सकेन भने त के भन्ने? तात्तो न छारोको के आश मात्रै देखाउँछन् ।’
यस्तो अभिनय गर्ने भने मुन्द्रे जितु नेपाल हुन् । उनले ठ्याक्कै देउवाको आवाज निकालेका छन् । हाउभाउ समेत उस्तै गर्ने प्रयास गरेका छन् । राजनीति देखेर वाक्क भएका जनतालाई यो सानो क्लिपले भने राम्रै मनोरञ्जन दिएको छ । यसको खुब सेयर भएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा पनि किसिम किसिमका प्रतिक्रिया आएका छन् ।
पार्टी एकता कायम भएपछि वामदेव खुशी हुदै दिए यस्तो सन्देश...